အိုဇေးလ် (ရီးယဲလ်/ဂျာမဏီ) - News @ M-Media
in ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ — March 15, 2013
မတ်လ ၁၅ ၊ ၂၀၁၃
အိုဇေးလ် (ရီးယဲလ်/ဂျာမဏီ) [နာမည်ကျော် မွတ်စလင် အားကစားသမားများ ကဏ္ဍ]
အမည်အပြည့်အစုံ မီစု အိုဇေးလ်(Mesut Özil)
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၅. ၁၀. ၁၉၈၈
မီစု အိုဇေးလ်ကို ဂျာမနီနိုင်ငံ ဂယ်လ်ဆင်ကေးရှန်း(Gelsenkirchen) မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး တတိယမြောက် တူရကီ-ဂျာမန်မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ သူ၏ လူငယ်ကစားသမားဘ၀ကို ဂယ်လ်ဆင်ကေးရှန်းမြို့ရှိ အသင်းများတွင် ကျင်လည်ခဲ့ရပြီး Rot-Weiss Essen ကလပ်တွင် ငါးနှစ်ကြာကစားခဲ့သည်။
၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ရှော်ကေးအသင်း၏ လူငယ်ဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မကြာမီမှာပင် အသင်းကြီးသို့ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ၀ါဒါဘရီမင်းအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
၀ါဒါဘရီမင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ၄ ဒဿမ ၃ သန်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၃ နှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ အသင်း၏ ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဖြစ်သည့် ဘရာဇီးကစားသမား ဒီယေဂို(Diego) နေရာတွင် ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ဂျာမနီ ရှုံးထွက်ဖလား (DFB-Pokal) ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ရှုံထွက်ဖလား နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ လေဗာကူဆင်အား တစ်ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိသောပွဲတွင် အနိုင်ဂိုးအား သွင်းယူပေးခဲ့လေသည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ၀ါဒါဘရီမင်အသင်းသည် ယူအီးအက်ဖ်အေဖလား နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ရှက်တာဒိုးနက်အသင်းအား ရှုံးနိမ့်ကာ ဒုတိယဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။ ပြည်တွင်းအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွင်မူ အဆင့် ၁၀ သာရရှိသော်လည်း အိုဇေးလ်မှာ အသင်းဖော်များဂိုးသွင်းနိုင်ရန် ၁၅ ကြိမ်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင် ၃ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘောလုံးရာသီတွင် အိုဇေးလ်မှာ အထူး ခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီး ၀ါဒါဘရီမင် အသင်းမှာလည်း အမှတ်ပေးဇယား တတိယနေရာရရှိခဲ့သည်။ ၃၁ ပွဲ ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ၉ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ကာ ၁၇ ကြိမ် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာဖလားတွင် ဂျမနီအသင်းနှင့်အတူ ခြေစွမ်းပြခဲ့ခြင်းကြောင်း ဘာစီလိုနာ၊ အာဆင်နယ်၊ မန်ယူ စသည့် ဥရောပ ထိပ်သီးကလပ်များက ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားခြင်းခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ရီးယဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး သူက..
“ရီယဲလ်အသင်းမှာ ကစားဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာကို မလိုပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားပြောရအောင်….. ခင်ဗျားဆိုရင်လည်း ဒီကလပ်(မှာ ကစားဖို့) ကို ငြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် ၀ါဒါဘရီမင်ကနေ အလျင်စလို ထွက်ခွာဖို့မရှိပေမယ့် (ဒီအသင်းဟာ) ခေါင်းငြိမ့်ရမယ့် အသင်းမျိုးပါ။ သူတို့ဟာ ထူးခြားတဲ့သမိုင်း၊ (ခမ်းနားတဲ့) ကစားကွင်း၊ ကမ္ဘာအဆင့် ကစားသမားတွေ အသင်းပြည့်ရှိတဲ့ ကလပ်တစ်ခုပါ။ ဘာနေဗျူး(ရီးယဲအသင်း၏ ကွင်း) မှာ ကစားရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ သိပ်ကို အံသြစရာပါ။” ဟု သူက ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
ပွဲဦးထွက်အဖြစ် သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ ဟာကျူလီ(Hércules)အသင်းနှင့်ကစားသည့် ခြေစမ်းပွဲတွင် ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ အိုဇေးလ်၏ ကျောနံပါတ်များမှာ ပြောင်းလဲမှုများ ရှိခဲ့လေသည်။ ရာသီမစမီတွင် ကျောနံပါတ်မှာ ၂၆ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထဦးဆုံး ပွဲထွက်ရာတွင် နံပါတ် ၁၉ ဂျာစီကို ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့သည်။ ရီးယဲလ်အသင်းသို့ တော့တင်ဟမ် ကစားသမား ရာဖေး ဗန်ဒါဗတ်(Rafael van der Vaart) ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အိုဇေးလ်သည် နံပါတ် ၂၃ ဂျာစီကို ၀တ်ဆင်ခဲ့သည်။
ရီးယဲလ်အသင်းတွင် ဘရာဇီးလ်ကစားသမား ကာကာ၏နောက် ဒုတိယ ကစားသမားအဖြစ်ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ကာကာ ခွဲစိတ်ကုမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းတွင် သူသည် အသင်း၏ ပထမကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မာယော့ကာ အသင်းနှင့်ကစားသည့် လာလီဂါပွဲစဉ်တွင် ဒီမာရီယာ အစား လူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီး သူ၏ ပထမဆုံး လာလီဂါ ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ရီးယဲအသင်းနှင့် ချန်ပီယံလိဂ် ပထမဆုံးပွဲအဖြစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ အေဂျက်အသင်းနှင့် ပွဲစဉ်တွင် ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး အသင်းဖော် ဟီဂူအင် ဂိုးသွင်းနိုင်ရန် ဖန်တီးပေးခဲ့လေသည်။ လာလီဂါ ပထမဆုံးဂိုးကို ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ကစားသည့် ဒီပို့တီဗို အသင်းနှင့်ပွဲစဉ်တွင် သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် အေစီမီလန်အသင်းနှင့် ကစားသည့်ပွဲတွင် ချန်ပီယံလိဂ် ပထမဆုံး ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့သည်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘောလုံးရာသီအပြီးတွင် အိုဇေးလ်သည် အသင်းဖော်များ ဂိုးသွင်းရန် ၂၅ ကြိမ် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဥရောပ အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲအားလုံးတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မီဒီယာများ၊ အသင်းဖော်များ၊ ရီးယဲလ်အသင်း၏ ပရိတ်သတ်များကလည်း သူ၏ စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် ချီးကျူး သြဘာပေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘောလုံးရာသီတွင် အိုဇေးလ်သည် နံပါတ် ၁၀ ဂျာစီကို ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့သည်။ နည်းပြ မော်ရင်ဟိုက သူအား အသင်း၏ ကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင်အဖြစ် သုံးစွဲခဲ့သည်။ ရီးယဲအသင်းတွင် ခြေစွမ်းပြမှုကြောင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘောလုံးရာသီအတွက် ယူအီးအက်ဖ်အေမှ ချီးမြှင့်ပေးအပ်သည့် ရွှေဘောလုံးဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဂျာမနီ မဂ္ဂဇင်း ကစ်ကာ(kicker)နှင့် အင်းတာဗျူးတွင် သူက……
“ကျနော့်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ကို ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်မှာပဲ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ အရှေ့မှာ ကျနော် အချိန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်၊ လူငယ်ကစားသမား အများအပြားနဲ့၊ ကစားသမားကောင်းတွေလည်း ရှိနေဦးမယ်၊ ဒါကြောင့် ဒါဟာ ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် (အသင်း) အနာဂတ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကျနော်သိပါတယ်။ ပြီးတော့ ရီးယဲအသင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေမယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။” ဟု သူ၏ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
အိုဇေးလ်သည် ၂၀၁၂ မေလ ၂ ရက်နေ့တွင်ကစားသည့် ဘီဘာအိုအား သုံးဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိသောပွဲတွင် ရီးယဲလ်အသင်း၏ ပထမဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ ထိုပွဲအနိုင်ကြောင့် ရီးယဲအသင်းသည် ၃၂ ကြိမ်မြောက် လာလီဂါ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘောလုံးရာသီအပြီး လာလီဂါ၏ ဘောလုံးဖန်တီးပေးပို့နိုင်မှု ဇယားတွင် ၁၇ ကြိမ်ဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်အသင်းနှင့် ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းတွင် သူ၏ စွမ်းဆောင်ချက်များကြောင့် ယူအီးအက်ဖ်အေမှ ချီးမြှင့်သည့် ဥရောပ အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ဆန်ကာတင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အိုဇေးလ်းအား ဂျာမနီ ၁၇ နှစ်အောက် လူငယ်အသင်းမှ ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ၂၁ နှစ်အောက်လူငယ်အသင်းမှ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ် လာခဲ့လေသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကစားသည့် ၂၁ နှစ်အောက် ဥရောပဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲ အင်္ဂလန်အသင်းအား ၄ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သောပွဲတွင် ပွဲစဉ်အတွင်း အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်နေ့ နော်ဝေအသင်းနှင့် ကစားသည့် ခြေစမ်းပွဲတွင် အိုဇေးလ်သည် ဂျာမနီ လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးအတွက် ပထမဆုံး ကစားခွင့်ရခဲ့သည်။ တောင်အာဖရိက အသင်းနှင့် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် ကစားသည့် ခြေစမ်းပွဲတွင် လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ပထမဆုံးဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ထိုပွဲမှာ သူ၏ လက်ရွေးစဉ်ကစားသမားဘ၀ ၃ ပွဲမြောက်ဖြစ်လေသည်။
ဂျာမနီ လက်ရွေးစင်အသင်းတွင်ကစားရန် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ သူက….
“ဂျာမနီမှာ ကျနော်ဟာ တတိယမျိုးဆက်ပါ။ ကျနော့်အဖေက ဒီမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်တော့ တူရကီဟာ အမြဲတမ်း ထူးခြားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျာမနီအသင်းအတွက် ကစားဖို့ ကျနော့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျနော် သံသယ မဖြစ်မိပါဘူး။” ဟု FourFourTwo မဂ္ဂဇင်း နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အိုဇေးလ်သည် တောင်အာဖရိကတွင် ကျင်းပသည့် ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝင် ဂျာမနီ လက်ရွေးစင်အသင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပွဲစဉ်အားလုံးတွင် ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဂျာမနီအသင်းမှာ အုပ်စု ပထမဖြင့် ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၆ သင်းအဆင့်တွင် အင်္ဂလန်အသင်းကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုး၊ ကွာတားဖိုင်နယ်တွင် အာဂျင်တီးနားအသင်းကို ၄ ဂိုး ဂိုးမရှိ ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ရာ အိုဇေးလ်မှာ အသင်းဖော်များ ဂိုးသွင်းရန်အတွက် ဖန်းတီးမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေဘောလုံးဆုအတွက် ဖီဖာက ထုန်ပြန်သည့် ဆန်ကာတင် ကစားသမား ၁၀ ဦးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အိုဇေးလ်သည် ယူရို ၂၀၁၂ ခြေစစ်ပွဲဝင် ဂျာမနီအသင်းအတွက် မောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ခြေစစ်ပွဲ ၁၀ ပွဲကစားရာတွင် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့သော ဂျာမနီအသင်းအတွက် သူသည် ၅ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ တိကျသော ဘောလုံးပေးပို့သူအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ ၇ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဖန်တီးပေးပို့ခဲ့ကာ ယူရို ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွင် အမြင့်ဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ပွဲစဉ်အတွင်း အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်း ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၆-၂၀၀၇ ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါ (ဒုတိယ)
၂၀၀၇ ဂျာမန် ရှုံးထွက်ဖလား (ဒုတိယ)
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဂျာမန် ရှုံးထွက်ဖလား (ချန်ပီယံ)
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဂျာမန် ရှုံးထွက်ဖလား (ဒုတိယ)
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ယူအီးအက်ဖ်အေဖလား (ဒုတိယ)
၂၀၁၁-၂၀၁၂ လာလီဂါ (ချန်ပီယံ)
၂၀၁၀-၂၀၁၁ လာလီဂါ (ဒုတိယ)
၂၀၁၀-၂၀၁၁ စပိန်ဘုရင့်ဖလား (ချန်ပီယံ)
၂၀၁၂ စပိန်စူပါဖလား (ချန်ပီယံ)
၂၀၁၁ စပိပန်စူပါဖလား (ဒုတိယ)
၂၀၀၉- အသက်၂၁နှစ်အောက် ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံ)
ပွဲစဉ်အတွင်း အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု (၂၀၀၉- အသက်၂၁နှစ်အောက် ဥရောပဖလား ဗိုလ်လုပွဲ)
ပွဲစဉ်အတွင်း အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု (၂ကြိမ်) (ယူရို ၂၀၁၂၊ ဂျာမနီနှင့် ပေါ်တူဂီ၊ ဂျာမနီနှင့် ဂရိ)
Tags: famous muslim sports players, famous_muslim_football_player, Germany, RealMadrid